Umhlahlandlela Wabakhangisi Wokukhangisa Kokusesha Kwamaselula
NgoMsombuluko, Disemba 31, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngesonto eledlule ngichithe isikhathi esithile nabazali bami futhi ngethuke kakhulu lapho bengikhombisa ukuthi bobabili badayisa ngomakhalekhukhwini babo ngama-iPhones. Ngenkathi bobabili bekhungathekile ngokufunda ukuthi bangazisebenzisa kanjani, bangitshele ukuthi empeleni bekungabizi kakhulu i-iPhone 4 kuneselula ejwayelekile. Vele, okuphakathi ngaphakathi kulokho ukuthi umhlinzeki wabo weselula unethemba lokuthi uzokhipha imali eyengeziwe evela kwi-smartphone kunalokho abebezoba nayo ngemodeli eshibhile. Kunoma ikuphi, uMama wami wayesevele amukela izinhlelo zokusebenza zokuthenga zasendaweni kanye nosesho lwasendaweni.
Kungumsebenzi wesikhathi nje ngaphambi kokuthi umakhalekhukhwini ojwayelekile ungasebenzi futhi ungabe usasatshalaliswa. Lokhu kuzonikeza uquqaba ukufinyelela kusesho lwasendaweni kanye nasezintweni zokuthenga - ngokuqhubeka nokunyusa umthamo nokuthandwa kokukhangisa kosesho lweselula. Izinombolo ziyashaqisa kanti nethuba selivele lifikile lokuthi abathengisi abazimisele basebenzise ithuba labo. Abakwa-StartApp basebenzisana nabathuthukisi bohlelo lokusebenza ukubasiza ukuthi benze imali eningi kusuka kuzinhlelo zabo zokusebenza zamahhala ngokusebenzisa imali yokwenza usesho futhi bahlanganise le infographic kubakhangisi abaphambili beselula:
Tags: isikhangiso seselulaukukhangisa okuhambayousesho lweselula
Faka inhliziyo yakho ebuhlotsheni bakho